DAAWO: Galmudug iyo Ahlu-sunah oo Heshiis ku gaadhay Jabuuti iyo waxa la isku raacay oo lasoo bandhigay (Video) | Kalshaale
DAAWO: Galmudug iyo Ahlu-sunah oo Heshiis ku gaadhay Jabuuti iyo waxa la isku raacay oo lasoo bandhigay (Video)
Dec 3, 2017 - 32 Aragtiyood
Jabuuti (Kalshaale) Dalka Jabuuti waxaa heshiis ku kala saxiixdeen Maamulada Galmudug iyo Ahlusuna Wal-jameeca, Kadib wada hadal uga socday muddo 8 cisho ah dalka Jabuuti, waxaana wada hadaladan gadhwadeen ka ahaa Urur Goboleedka IGAD.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo Madaxweynaha Maamulka Ahlusuna Sheekh Maxamed Shaakir ayaa kala saxiixday heshiiskan oo la sheegay inuu yahay mid Hordh dhac, Iyadoona heshiiska ayaa lagu wadaa in lagu saxiio magaalada Muqdisho.
Waxaa saxiixa heshiiskan goobjoog ka ahaa Xubno ka socday Ahlusuna, Galmudug, dowladda Federaalka iyo IGAD.
Ahlusuna iyo Galmudug ayaa isu soo dhowaansho ka muujiyay khilaafaad horay u ragaadiyay labada dhinac, waxaana haatan isku raaceen inay ku midoobaan maamul mid ah, Waxaana si wada jir ah Warbaahinta ula hadlay Madaxwaynaha Galmudug iyo Ahlu-sunnah.
Waan soo dhaweynayaa hadayna wadin munaafaqadii soomalida oo hadhow markay laabtaan war kale sheegin.
Maxaase lagu heshiiyey ma in subaga la wada dhuuqo mise galmudug.
Itoobiyase goob joog ma ahayd illeen koodan suufiyadu cid kale waxba kama maqlaanee.
Isku soo wada duuboo ha la heshiiyo loo kala kici waa.
Heshiis kulahaa mxaa been la isusheegay sacad iyo ceyr miyaa siyaasad iskuhaya labadan nin oo kala metalaya maamulada waa microphone gadaashoda sheydhamo aan lojedin taagan somalida dhan dhibkaas ayaa heysta.Hogaamiye somali ah oo fikirkiisa si xor ah usheegankara majiro anaga dhan gardaduub uxiranahay.
Inkastoo aanan guul u arag in laba nin oo walaalo ah degaana ka dhexeeyo in lagu heshiiyo wadanka dibadiisa
Hadana waan soo dhaweyneynaa heshiiskaas waxaana ilaahey ka sokoow mahada leh walaalaha jabuuti ee hiilwalaal
Governo xaaf wuxuu geed dheer iyo geed gaaban u koray in uu la heshiiyo ahlusunna shaakir subagle luf luf amxaaro
Waana ku mahadsan yahay
Walaalaha galguduud waxaan u rejeynayaa guul barwaaqo iyo wax wada qabsi
Maasha Allah Waa Waxlagu Farxo Umad Walaalo Waqti Badan Kala Maqnaa Iney Maanta Heshiiyeen Waa Illahay Mahadiii Illaahay Ha Idinkadhigo Kuwii Wanaaga Isku Raaco Xumaatadana Iyo Kalshakiga Iyo Inla Idinkala Dabqaado Kuwii Kafogaado Allahaa Idinka Dhigo
lakin waxan la yaabay waxa ahlusuna 40 xildhibaan oo qabiil ah lo siiyay yaab oo u gaara dowlada dhan awoodeda ayaga aya hadhow la wareegi ileen awooda dowladu wa barlaaanke
Muna kkkk ceyrka waa awooda kaliya ee hawiye leeyhy inaan cida difaaco iyo in aan cadkeyga banaanka ladhigin mayeeli karno
Muna waxay rabtaa in xaafad gaalkacayo ka mida galmudug u afduubnaato.
Waxii la sheegaba anigu ma ku jiraa bay leedahay.kkkkk
kkkkk maximum ceyr wax uma diidanin wa garabkeena kaligodna wax lama siin ee waxan arkyay in tartan xildhibaan la siiyay ahlusuna 10 xildhibaan marexan murasade 7 dir 7 habar gidir iyo iyo duduble 15 marka Marsha waxan uga jeeda cadalad daro away shekhal away waceysle cade
gargaad maya wan jeclahau inay galmudug horey u socoto xafada gaalkacyo galmudug way as astay lakin qorshahedu wuxu aha inlay gaarto intay hada gaartay wana ku faraxsanahay jira hadii madaxwaynaha sacad laga qaado kama xumo wayo sacad wa laf ka mid ah lafaha galmudug daga shekhaal inay madaxwayne noqoto xita wan sodhaweyn cidkasto so baxda xira waceysle gabar qaran ayan ahay sxb ha igu qaldamin
Waa ilaahay mahadii hadii walaalaha Galmudug is raaceen oo hashiisiinta.
Waa guul Umada dhulkaas Dagan ee
Somaliyeed u Soo hoyatay
Muna salaan sare walasheey
Anigoo dareensan jawaabta in aad kalahage u waday hadaad aniga magaceyga usoo marisay waxba kama qabo
Waan ku ogahay in aad tahay gabar reer galmudug ah dadkuna ay iskugu kaa mid yihiin
Waxaan rejeynayaa Mudane kalahage in uu jawaabtaas ku qanco
Nimankii dhabayaco caawa jiif majiro mar hadii cumandostii ceyr hogaanka galmudug lawareegen waa in xuduuda ciidamada lageeya yacni burtinle sida uu dhigayo sharciga galmudug.
Waan soo dhoweeynayaa heshiiska walaalaha Soomaaliyeed ee Galmudug. Waar xurguftii nna dhammeeya oo maamulka mideeya.
Annaga khaasatan haddaan reer Puntland nahay heshiiskiinna iyo midnimadiinna dan weyn baa nooga jirta, waayo wax badan oo wanaag iyo horumara oo aan wada qabsan lahayn ayaa heshiiskiinna ku xiran.
War laga bax wakhtigii colaadaha iyo mushkiladaha deriska ka dhexdhaca, waxaa La marayaa wakhtigii inta deriskaa ay wax wada qabsan lahayd oo dalka iyo dadka la hormarin lahaa.
Markay colaad iyo rabshado tahay waa la kala qaybsamayaa, laakiin marka horumar loo jeesto waa la isu baahanyahay in horumarka la Isla kaashado.
Marka soo dhowaada idinkoo hal maamula aynu dadkeena u adeegnee. Dibudhaca iyo horumarka dadku waa isku xiran yahay. Haddii maamulka deriskaaga horumarsanyahay, way ku soo gaaraysaa, Hadduu dubudhacsanyahayna waa ku soo gaaraysaa. Waddanka waynu wada burburinay, waa markii aynu wada dhisi lahayn.
Gobolka Mudug oo colaado badan ka dhacayeen muddo badan. Waa markii uu ka nasan lahaa colaadaha uuna ku tallaabsanlahaa horumar aad u ballaran. Waanu wadnaa arrimahaas haddaan nahay jaalliyadaha reer Puntland iyo Galmudug. Waxaan oddorosaynaa Mudug inuu noqdo gobolka Soomaaliya hoggaaminaya xagga baacmushtarka iyo dhaqaalaha. Waxaan rajaynaynaa inuu noqdo gobolka ugu horreeya Soomaaliya ee yeesha laba dekadood oo caalamiya: Hobyo iyo Garacad: dadbaa u haysta dekadaha inaan la isu dhowayn karin, waa dad qaldan, marka la isu dhoweeyn a yaaba dhaqdhaqaaqooda ganacsi xoog bataa, arag maraykanka, xataa fiiri jabbuuti. Dekadaha waxay helidoonaan dhaqdhaqaaq baacmushtar oo xoogleh. Haddii Soomaalidu maqli jirtay reer Mudug gu waa is dagalaan keliya, waxaanu tusaynaa, inaan is noolayn karno isgarabsan karno waddanka iyo dadka barwaaqayn karro. Yaanay u qaadan walaalaha Galgaduud kkkkkkk…. reer Mudug wax wada qabsadkiisu inuu yahay mid iyaga wax u dhimaya, maya waa mid iyaga laftigooda dhaqaale ahaan dhisaya waayo Mudug iyo Galgaduud dhab ahaan waa isku gobol, marka horumarka mid ka dhaca kan kalana waa ka dhacayaa. War wataa tubtii nolosha iyo horumarka gobolka Mudug ee halloo diyaar garoobo.
Isu dhoweeyn = isu dhoweeyo
Asc mashalaah ninkii walalkiis IYO dariskisa laheshiyo umbaa somaliweyn laheshiin karo
Sxb caga dhigo oo wax la har habeen dhexdaas ah waxaan arkaayay adigoo reer pudland ku laban oo weerar ku ah galmudug
Hadana waxaad muujineysaa heshiiska galmudug in uu dhibaato ku yahay pudland oo waxaad abuureysa colaad ma fahmin waxa kaasoo gelaayo
Reer mudug ayagaa walaalo ah oo dadka isu xigo hadii galmudug heshiiso dhibaato kuma ahan pudland nabada pudland dhibaato kuma ahan galmudug
Koofur nadeedu wexey ku xiran tahay heshiiska reer mudug
Sxb soo reebo ma wanaagsano in aad kubadda hadba dhinacaad doonto u laado
Kkkkkkk…..sxb. Puntland midnimada iyo dowladnimada Galmudug waa noo dan. Waxaa dhibi nooga jiraa waa foowdada, dibudhaca, iyo dowlad la’aanta Galmudug. Aniga cabsidaan qabaa waa inaad awoodi weydaan inaad isu tanaasushaan oo hal maamul dhistaan. Nidaam shiddo ma keeno. Wax dhibka dagaalada, foowdada keenaa waa maamul laaanta. Dhisa maamulka aannu dabaaldegga ka soo qayb galnee.
Dusha hg maamul marabto xoog eey wax kuboobaan hadeey helaan hashoodii markaasey dhashay
Kkkkkkkk sxb. Habargidir maanta Soomaali waad u xujeeysantihiin, wixii hore u dhacay la iska cafi. Xaajadana la isla garay inaysan sidii hore ku sii socon karin. Marka Habargidir hal xiraalaha haysta waa inay maamul dowli ah dhisaan. Waxaan kuu sheegay biniaadamku mar iyo labo waa qaldami karaa. Laakiin qalad mar walba la aqbali maayo. Soomaali maanta maamul dhulka uu ka taliyo nolol, nabad, iyo horumar ka sameeya ayaa la idiinka fadhiyaa. Tan haddaad ku khaldantaan, Soomaali idin cafin mayso.kkkkkkk … fahantu…shaxda iska ilaaliya.
Markaan is iraahdo si aad ah Galmudug u canaano, waxaan is iraahdaa armay ina adeertaa Muna inta xanaaqdo, kkkkkk… jeedalkeedii la soo baxdaa, markaasaan, Canaantii xoogaa basbasriyaa.
Dusha sxb anigu kumalihi hg weey kusaxanthy arinka aan kuusheegay lkn dhaqanka tolkeey sidaasaan ku arkay.meesha majeertenku jaajuusnimada wax kuraadiyaan ayaa kuwaan boobku kagalay kkkkkkkkk
garqaad hilmaani hadal kuma jiro kkkkkkk magacaga jaclahay inan qoro wa sidad sheegtay kalahage ayu ku socday qoraalku
dusha kkkk isku tufowgu wu banan yahay n garqaad maxamud wa jirjiroole habar gidir ceyr ayu iska dhiga lakin ma aha,wan fahansanahay lakin,wan ka dan lanahay kkkkk
dusha,soomaali anagay naga bilaabata naguna dhamaata kkkk adigu in ilahow,soomaali guule dheh
Qayr baah u rajayn hadday chaoska ka baxayaan!
Sparada taala gobolada dhexe waa in la qaadaa oo dadka gobolada dhexe helaan maamul, qudaar furaash ah. kkkkkk
Ka warama hadday Galkacyo moos baqbaq ah laga cuno oo laami toos ah, Bossaso iyo Hargeysa laga cuno moos fresh ah, waayo Hargeysa Ethiopa uga yimaadaa, Bossaso Cumaan doon!
Galkacyo qaadka Ethiopia diyaaradda keento fresh mooska afgooye baqbaq sidii 1000 Ispaaro hadba laaluush loo weydiinaayey!
Ganacsadihii wax ma helin dadkii loo waday wax ma helin!
Heshiiskaas rajo ayuu dadka geliyey laakiin reer aan aqaan u malaynmaayo in maamul iyo amni waara soo wadaan!
Isku talaasul dhaqan uma laha!
Sxb bal horta in aad Buurtile timaadid hanoo damabysee! bal marka hore Galnus mideeya oo hal maamul oo kala dambeeya samaysta oo hal nin shirgudoomiye u yahay!
Hadaan xitaa isku duulayno anagoo laba maamul ah aan isku duulnee!
Hadda hadaan Baraxley weerarno waxaa la oran dad shacab ah ayey Puntland kusoo duushay, hade waa militia beleed Galacyo isku dagaalay!
Waraqliga xagee kaaga jiraa? Wax adoo maamul ah waxa kaa waayey ma adoo lawless ah oo xitaa Mooryaantaada ceshan karin ayaa kaa helin!
Galkacyo waa meesha ugu amni xun Puntland waana magaalada ugu chance fiican maadama isku xirto Somalida oo dhan- Haddaad Hargeysa- Bossaso-Hobyo-Xamar. Jigjiga-Wardheer-xeebaha Bariga fog Somalia- Ilaa Xamar meesha u socota waa in Galkacyo martaa!
Waxa amnigeeda saas ka dhigay waxay deris la tahay Galmudug oo Chaos ah, fowdo!
Mooryaantooda maalinta rabaan suuqa baasuuke ku ridin! Oo lagu kala cararin!
Hadday dowlad ka jirto Galmudug waxaas ma dhaceen!
Ninkii waxa kale kuusheegay iyo Puntland ma rabto Galmudug maamul ka jiro! Waa jaahil aan wax ogeyn!
Dhinku waxaa weeye horta maamul shaqeeya ma dhisi karaan?
Waxaan xasuustaa Puntlamd mushaar u qortay poliska Galkacyo dhanka Galmudug!
Dhowr bilood ma shaqayn, waayo nin mushaar qaatay waxba ma qaban karo ee maamul ka dambeeya ayaa wax qaban kara!
yuuskii miya wada dhabayacoy vuris,an dhabayaco,ahayn gaalkacyo kama jiro
Yuus maaha, waa run! Mooryaanta degen dhinaca Puntland wax ma samaynkaraan oo gudaha ayaa la dhigin, way ceshan karaan Mooryaantoota, laakiin Mooryanta dhinaca Galmudug cidna ma ceshato karto waayo dowlad laga baqayo kama jirto.
Waxaa Galkacyo lagu jooga odayaal iyo ganacsato laaluush siisa.
Ileen ayagana ganasiga ka istaagine, dadkiina waa qixin!
Galkacyo dowlad amni sugta laguma joogo taas ogow!
Insha allah haddii dowlad amniga sugta hesho Galmudug magaalada horumar weyn gaarin!
Waxaa markhaati madoon ah somalia ama guud ahaanba soomaalida geeska inay reer mudug yihiin dadka ugu aqliga iyo cilmiga liita anoonkala qaadaynin labada dhinacba waa dad fawldada kahela waa dad kala dambayntu dhibto
Waa dad aan dhaqan ulahayn darisnimo iyo is xaqdhawr
Waa dad aadamaha ka indho adag waxa dunidu kaxishootana ayagu faan u arka.
Waa dad isu arka inay geesiyaal yihiin
Ooy dagaal waxka yaqaanaan lkn markaad usii fiirsato aad garanayso inay somali iyo afrikaanba ugu fulaysanyihiin waayo maalin walba xabad joogto ah hadana daqiiqado kadib is eedayn iyo calaacal labada dhan ah aad maqli ninka geesiga ah xabadi waxay tahay waa yaqaan kumana degdego haday qabsatana eedayn iyo nasoo kala gaadha mabilaabo ee ciday is hayaan waykala baxaan
Kudarsoo dadka dhaqanka geesinimada lagu yaqaano nabad iyo colaadba way yaqaanaan lkn reer mudug midna mayaqaanaan